Film Patrika » चुचुराेमा पुगेपछि तल अाेर्लिनै पर्छः अार्यन सिग्देल
३१ असार २०७५ |
चुचुराेमा पुगेपछि तल अाेर्लिनै पर्छः अार्यन सिग्देल
काठमाडाैं/ लभस्टाेरी फिल्ममा नयाँनयाँ स्टारहरूकाे अागमन भइसकेकाे छ । निर्माताहरू तिनै युवा कलाकारका पछि दगुरिरहेका छन् । अाफ्नाे उमेर घर्किसके पनि अार्यन सिग्देल अझै पर्दामा राेमान्स गर्न रूचाउँछन् । उनकाे राेमान्टिक फिल्म ‘कायरा’ अाउँदाे साउन १८ गते रिलिज हुँदैछ । लक्ष्मण रिजालद्वारा निर्देशित ‘कायरा’मा अार्यनले नयाँ पुस्ताकी हिराेइन साम्राज्ञीसँग जाेडी बाँधेका छन् । ‘कायरा’कै सेराेफेराेमा फिल्मपत्रिकाले अार्यनसँग गरेकाे कुराकानीः
तपार्इंकाे करियरमा उतारचढाव अाएकै हाे ?
मेराे करियर सधैं एकनाशकाे रहेन । उतारचढाव अाइरह्याे । म यसलार्इ सहर्ष स्विकार्छु । चुचुराेमा उक्लेपछि अाेर्लिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेकाे छु । उतारचढाव अाउँदा म अझ बलियाे हुन्छु ।
तपार्इंकाे करियर एकैनाशकाे नहुनुमा काे दाेषी छ ?
म नै दाेषी छु । म अहिले वा विगतमा जुन स्थानमा पुगेकाे छु, त्यसमा मेराे अाफ्नै हात छ । अरूलार्इ जस वा अपजस दिन चाहन्न ।
खास किन अरूलार्इ जस दिनुहुन्न ?
किनभने म अरूकाे कुरा सुन्दिनँ । कुनै विषयमा निर्णय लिनुपर्दा अाफैं लिन्छु । अरूकाे सल्लाह वा सुझाव माग्ने मेराे बानी छैन ।
‘कायरा’मा फिलिपिन्सकाे सेटअप रहेछ, किन त्यही देश राेज्नुभयाे ?
जय भन्ने पात्र प्रेममा असफल भएपछि कसैले नभेट्ने ठाउँमा जान्छु भनेर फिलिपिन्स जान्छ । नेपालीहरू खासै नपुग्ने ठाउँ भएर फिलिपिन्स राेजेकाे हुँ ।
फेरि लभस्टाेरी फिल्म नै बनाउनुभयाे, किन ?
मलार्इ देशविदेश सबैतिरका दर्शकहरूले लभस्टाेरी नै चाहियाे भन्दै अाएका थिए । त्यहीभएर लभस्टाेरी नै गराैं न भनेर याे फिल्म बनाएका हाैं ।
अार्यनले किन ‘रूद्रप्रिया’ फिल्म खेले भनेर धेरैले साेधेका छन् । खास किन खेल्नुभयाे ?
फिल्मकाे विषय राम्राे थियाे । मेराे क्यारेक्टरभन्दा पनि विषयले मलार्इ तान्याे । तर, साेचेजस्ताे फिल्म बनेन । त्याे फरक कुरा हाे ।
याे फिल्मले तपार्इंकाे करियरमा कति फरक पार्ला ?
‘कायरा’ फिल्म हिट भयाे भने फाइदा नै हाेला । दर्शकलार्इ सन्तुष्ट बनाउन सकेँ भने म पनि सन्तुष्ट हुनेछु । तर यदि फिल्मले साेचेकाे जस्ताे रिजल्ट ल्याएन भने पनि म विचलित हुँदिनँ । अर्काे राम्राे फिल्म बनाउनेतिर लाग्छु ।
तपार्इंहरूले ‘कायरा’मा सुविन भट्टरार्इकाे हरफ चाेर्नुभयाे भनेर अाराेप लगाइएकाे छ, के हाे ?
त्याे संयाेगमात्र हाे । भविष्यमा पनि यस्ता हरफहरू मेल खान सक्छन् । यसलार्इ ठूलाे इस्यु बनाउन जरूरी छ जस्ताे लाग्दैन ।
अब तपार्इं लभस्टाेरी फिल्ममै समर्पित हुने हाे ?
हाेइन । लभस्टाेरी सुहाउँछ भन्छन् । तर, म एक्सन वा अरू जनराका फिल्म पनि खेल्नेछु । त्यही हाे स्क्रिप्ट राम्राे हुनुपर्याे ।
साम्राज्ञीसँग पहिलाेपटक काम गर्नुभयाे, कस्ताे रह्याे अनुभव ?
म उनीदेखि निकै प्रभावित भएकाे छु । काममा निकै डुब्ने बानी रहेछ उनकाे । फिल्म साइन गरेपछि उनले अाफन्तकाे बिहेमा जाने कार्यक्रम नै क्यान्सिल गरिन् । र, ‘कायरा’काे काममा अाइन् । अर्काे प्राेजेक्टमा मिल्ने कथा भयाे भने हामी फेरि सँगै काम गर्नसक्छाैं ।
प्रकाशित मिति ३१ असार २०७५, आईतवार ०७:२५